सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर सर्वशक्तिमान, सर्वप्रापक र पूर्ण रूपमा साँचो परमेश्‍वर हुनुहुन्छ! उहाँले सात ताराहरू धारण गर्नुहुन्छ, उहाँ सात आत्माहरू, सात आँखाहरूद्वारा सुसज्जित हुनुहुन्छ, उहाँले सात मोहरहरू, सात चर्मपत्रहरू खोल्नुहुन्छ, तर त्यति मात्र होइन, उहाँले सात महामारीहरू र सात कचौराहरूको प्रशासन गर्नुहुन्छ र सात मेघगर्जनहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। धेरै पहिले उहाँले सात तुरही पनि बजाउनुभयो! उहाँले सृष्टि गर्नुभएका र पूर्ण बनाउनुभएका सबै थोकले उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ, उहाँको महिमा गाउनुपर्छ र उहाँको सिंहासनको बढाइ गर्नुपर्छ। हे, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर! तपाईं सबै थोक हुनुहुन्छ। तपाईंले सबै थोक हासिल गर्नुभएको छ, र तपाईंको साथमा सबै थोक पूर्ण, चम्किला, मुक्त, स्वतन्त्र, बलिया, र शक्तिशाली छन्! केही पनि लुकाइएका वा गुप्त राखिएका छैनन्; तपाईंको साथमा, सबै रहस्यहरू प्रकटित हुन्छन्। यसअलावा, तपाईंले आफ्ना शत्रुहरूको भीडलाई न्याय गर्नुभएको छ, तपाईंले आफ्नो प्रताप प्रकट गर्नुहुन्छ, आफ्नो प्रचण्ड ज्वाला दर्साउनुहुन्छ, तपाईंले आफ्नो क्रोध प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, र त्यो भन्दा पनि बढी, तपाईंले आफ्नो अभूतपूर्व, चिरस्थायी, पूर्ण अनन्त महिमा प्रकट गर्नुहुन्छ। सबै मानिसहरू विनासन्देह जय-जयकार गर्न र गाउन अनि यी सर्वशक्तिमान्, पूर्ण रूपमा सच्चा, सर्वजीवी, प्रचुरतापूर्ण, महिमित र अनन्तदेखि अनन्तसम्‍म रहनुहुने साँचो परमेश्‍वरको स्तुति गर्न बिउँझनुपर्छ। उहाँको सिंहासनको अटुट बढाइ गरिनुपर्छ, उहाँको पवित्र नाउँको प्रशंसा र महिमा गान गाइनुपर्छ। यो मेरो—परमेश्‍वरको—अनन्त इच्छा हो, र उहाँले हामीलाई प्रकट र प्रदान गर्नुहुने असीमित आशिष् हो! हामीमध्ये कसले यसको उत्तराधिकार पाउँदैन र? परमेश्‍वरको आशिष्‌को उत्तराधिकार पाउनको लागि आराधना गर्दै उहाँको पवित्र नाउँलाई बढाइ गर्नुपर्छ र उहाँको सिंहासनलाई फन्को मार्नुपर्छ। उहाँसमक्ष अरू नै आशय र अभिप्रायहरू बोकेर जानेहरू सबैलाई उहाँको प्रचण्ड ज्वालाले पगाल्नेछ। आजको दिन उहाँका शत्रुहरूको न्याय गरिने दिन हो र आजकै दिनमा तिनीहरू नाश पनि हुनेछन्। यसअलावा, यो दिन म, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर प्रकट हुने अनि मैले महिमा र मान प्राप्त गर्ने दिन पनि हो। हे, सबै मानिसहरू! चिरकालदेखि अनन्तसम्मै हामीलाई प्रेमिलो-दयालुपन बर्साउनुहुने, मुक्ति र आशिष् दिनुहुने, उहाँका छोराहरूलाई पूर्ण बनाउनुहुने, र सफलतापूर्वक उहाँको राज्य हासिल गर्नुहुने सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको स्तुति र स्वागत गर्नलाई झट्टै उठ! यो परमेश्‍वरको सानदार काम हो! यो परमेश्‍वरको अनन्त पूर्वनिर्धारित गन्तव्य र बन्दोबस्त हो—त्यसैले, उहाँ स्वयम् हामीलाई मुक्ति दिन, हामीलाई पूर्ण बनाउन, र हामीलाई महिमामा ल्याउनको लागि आउनुभएको छ।
जो उठ्दैनन् र साक्षी दिँदैनन् ती सबै अन्धाहरूका पूर्वजहरू र अज्ञानताका राजाहरू हुन्। तिनीहरू अनन्तसम्मै अज्ञानी, चिरस्थायी मूर्ख रहिरहनेछन्; अन्धाहरू अनन्तसम्मै मृतक रहिरहनेछन्। यही कारणले गर्दा हाम्रा आत्माहरू जागृत हुनुपर्छ! सबै मानिसहरू जाग्नुपर्छ। प्रतापी प्रचण्ड आगो र धर्मी न्याय ल्याउनुहुने र सम्पूर्ण रूपले पर्याप्त, प्रचुर, सर्वशक्तिमान र पूर्ण रहनुभएका महिमाका राजा, कृपाका पिता, छुटकाराका छोरा, प्रचुरतापूर्ण सात आत्माहरू, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको अटुट रूपमा जय-जयकार, प्रशंसा र स्तुति गाओ। उहाँको सिंहासनको सदासर्वदा बढाइ गरिनेछ। सबै मानिसहरूले यो परमेश्‍वरको ज्ञान-बुद्धि हो भनी देख्नुपर्छ; यो उहाँको मुक्तिको सुन्दर मार्ग र उहाँको महिमावान् इच्छाको उपलब्धि हो। यदि हामी उठ्दैनौं र साक्षी दिँदैनौं भने, समय बितिसकेपछि फेरि पछाडि फर्केर जान सकिनेछैन। हामीले आशिष् पाउँछौं कि दुर्दशा भन्ने कुरा हामीले के गर्छौं, हामीले के सोच्छौं र हामीले अहिले के-कस्तो जीवन बाँचिरहेका छौं भन्ने आधारमा हाम्रो यात्राको यो वर्तमान चरणको अवधिमै निर्णय गरिँदैछ। तिमीहरूले के-कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ त? सदासर्वदा परमेश्‍वरको लागि साक्षी दिनुपर्छ र उहाँको बढाइ गर्नुपर्छ; सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टको—अनन्त, अद्वितीय, सच्चा परमेश्‍वरको—बढाइ गर्नुपर्छ!
अब उप्रान्त, तिमीहरूले के स्पष्टसित देख्नुपर्छ भने परमेश्‍वरका लागि साक्षी नदिनेहरू सबै—यस अद्वितीय, सच्चा परमेश्‍वरका लागि साक्षी नदिनेहरू र उहाँको बारेमा सन्देह राख्नेहरू—तिनीहरू सबै बिरामी र मृतकहरू हुन्, र तिनीहरू परमेश्‍वरलाई चुनौती दिनेहरू हुन्! परमेश्‍वरका वचनहरू प्राचीनकालदेखि नै प्रमाणित हुँदै आइरहेका छन्: जसले मसँग बटुल्‍दैन, त्‍यसले छरपष्‍ट पार्छ, जो मेरो साथ छैन, त्‍यो मेरो विरुद्धमा छ; यो ढुङ्गामा कुँदिएको अपरिवर्तनीय सत्यता हो! परमेश्‍वरका लागि साक्षी नदिनेहरू सबै शैतानका दासहरू हुन्। त्यस्ता मानिसहरू परमेश्‍वरका छोराछोरीहरूलाई बाधा पुर्‍याउन र धोका दिन अनि उहाँको व्यवस्थापन बिथोल्न आएका छन्; तिनीहरूलाई तरवारले प्रहार गरिनुपर्छ! तिनीहरूमाथि असल अभिप्राय देखाउनेहरू सबैले आफ्नै विनाश निम्त्याउँछन्। तिमीहरूले परमेश्‍वरका आत्माका वाणीहरूलाई सुन्ने र तिनमा विश्‍वास गर्ने गर्नुपर्छ, परमेश्‍वरका आत्माको मार्गमा हिँड्नुपर्छ र परमेश्‍वरका आत्माका वचनहरूअनुरूप जिउनुपर्छ। यसअलावा, तिमीहरूले समयको अन्त्यसम्मै सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको सिंहासनको बढाइ गर्नुपर्छ!
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर सात आत्माहरूका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ! सात आँखाहरूका र सात ताराहरूका परमेश्‍वर पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ; उहाँले सात मोहोरहरू खोल्नुहुन्छ, र सम्पूर्ण चर्मपत्रहरू उहाँले फिँजाउनुभएको छ! उहाँले सात तुरहीहरू बजाउनुभएको छ, र उहाँको इच्छाअनुसार बर्साउनको लागि उहाँको पकडमा सात कचौराहरू र सात महामारीहरू छन्। ओहो, सधैँ सिलबन्दी गरी राखिएका सात मेघगर्जनहरू! तिनीहरूलाई प्रकट गर्ने समय आएको छ! ती सात मेघगर्जनहरूलाई ल्याउनुहुने उहाँ त तिमीहरूको आँखैअगाडि आइपुगिसक्नुभएको छ!
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर! तपाईंको साथमा सबै थोक मुक्त र स्वतन्त्र छन्; कुनै पनि कठिनाइहरू छैनन्, र सबै थोक सहजताका साथ चलिरहेका छन्! कुनै कुराले पनि तपाईंलाई अवरोध वा विघ्‍नवाधा गर्ने आँट गर्दैन, र सबै नै तपाईंसामु समर्पित हुन्छन्। समर्पित नहुने जोकोही मरेर जानेछन्!
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, सात आँखाहरू हुने परमेश्‍वर! सबै कुरा अत्यन्तै स्पष्ट छन्, सबै कुरा उज्याला र अनावृत छन्, अनि सबै कुरा खुलासा र उदाङ्गो भएका छन्। उहाँको साथमा सबै कुरा घामझैं छर्लङ्ग हुन्छन्, अनि परमेश्‍वर मात्र होइन, तर उहाँका छोराहरू पनि यस्तै छन्। उहाँ र उहाँका छोराहरूको सामुन्ने कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि वस्तु वा कुनै पनि विषयलाई लुकाउन सकिँदैन!
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका सात ताराहरू चम्किला छन्! उहाँले मण्डलीलाई सिद्ध तुल्याउनुभएको छ; उहाँले मण्डलीका आफ्‍ना सन्देशवाहकहरू स्थापित गर्नुभएको छ, अनि सम्पूर्ण मण्डली नै उहाँको भरणपोषणमा छ। उहाँले सबै सात वटै मोहोरहरू खोल्नुहुन्छ र उहाँ स्वयम्‌ले उहाँको व्यवस्थापन योजना र उहाँको इच्छालाई समापनतर्फ लैजानुहुन्छ। चर्मपत्र उहाँको व्यवस्थापनको रहस्यमयी आत्मिक भाषा हो, र उहाँले यसलाई फिँजाउनुभएको र प्रकट गर्नुभएको छ!
सबै मानिसहरूले यी गुञ्जायमान सात तुरहीहरूलाई सुन्नुपर्छ। उहाँको साथमा, सबै थोक सर्वविदित हुन्छन्, फेरि कहिल्यै लुप्त हुँदैनन्, र कुनै पनि दुःखकष्ट बाँकी रहँदैनन्। सबै थोक प्रकट गरिन्छन् र सबै नै विजयी हुन्छन्!
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका सात तुरहीहरू खुला, महिमावान् र विजयी तुरहीहरू हुन्! तिनीहरू उहाँका शत्रुहरूलाई न्याय गर्ने तुरहीहरू पनि हुन्। उहाँको विजय-उत्सवमाझ उहाँको तुरहीलाई उचालिन्छ! उहाँले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमाथि शासन गर्नुहुन्छ!
उहाँले महामारीका सात कचौराहरू तयार गर्नुभएको छ, उहाँका शत्रुहरू निशाना भएका छन्, र ती महामारीहरूलाई अत्याधिक प्रवाहका साथ छोडिएको छ र ती शत्रुहरू उहाँको प्रचण्ड ज्वालामा नष्ट हुनेछन्। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरले आफ्‍नो अख्तियारको शक्ति देखाउनुहुन्छ र उहाँका शत्रुहरू सबै नाश हुन्छन्। अन्तिम सात मेघगर्जनहरूलाई सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको अगाडि अबउप्रान्त सिलबन्दी गरेर राखिँदैन; तिनीहरू सबैलाई प्रकट गरिन्छ। तिनीहरू सबैलाई प्रकट गरिन्छ! उहाँले सात मेघगर्जनहरूद्वारा, पृथ्वीलाई स्थिर गरेर र यसलाई उहाँको सेवा गर्न लगाएर र अबउप्रान्त यसलाई उजाड नहुने तुल्याएर, उहाँका शत्रुहरूलाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउनुहुन्छ!
धर्मी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर! हामी सदासर्वदा तपाईंको स्तुति गाउनेछौं! तपाईं अटुट प्रशंसा, र अनन्त जय-जयकार र तारिफको योग्य हुनुहुन्छ! तपाईंका सात मेघगर्जनहरू तपाईंको न्यायका लागि मात्र प्रयोग गरिनु हुँदैन, बरु सबै कुराहरूलाई पूरा गर्नको लागि तपाईंको महिमा र अख्तियारको लागि अझै धेरै प्रयोग गरिनुपर्छ।
सबै मानिसहरू सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टको स्तुति र प्रशंसा गान गाउँदै सिंहासनको अगाडि हर्षोल्लास मनाउँछन्! तिनीहरूको आवाजले मेघगर्जनले जस्तै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई थर्काउँछ! पूर्णतया सबै थोक उहाँको कारण अस्तित्वमा छन् र उहाँकै कारण देखा पर्छन्। सबै महिमा, मान-सम्मान, अख्तियार, ज्ञान-बुद्धि, पवित्रता, विजय र प्रकाशहरू उहाँकै हुन् भनेर नमान्‍ने आँट कसले गर्छ र? यो उहाँको इच्छाको उपलब्धि हो, र यो उहाँको व्यवस्थापनको निर्माण-कार्यको अन्तिम समाप्ति हो!